I-Gestodene powder ukuthengiswa: Izinto ze-10 ezaziyo malunga ne-Gestodene powder ला AASraw
/Blog/Gestodene/I-Gestodene powder yokuthengisa: Izinto ze-10 ezaziyo malunga ne-Gestodene powder
ezaposwa ngomhla 08 / 15 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Gestodene.
Yonke into malunga ne-Gestodene powder
I-2.Biochem / physiol Actions-CAS: 60282-87-3
4.Ungathabatha njani i-Gestodene powder?
I-5.Gestodene i-effects effects effects
Izicelo ze-6.IziGestodene: i-Femodene
7.Gestodene powder ukuthengisa
I-Gestodene powder Abalinganiswa basisiseko:
Gestodene (60282-87-3) yindlela yokukhusela i-progestogen hormonal. Imveliso equkethe i-gestoden ibandakanya uMeane, ene-20 mcg ye-ethinylestradiol kunye ne-75 mcg ye-gestodene; kunye neGynera, ene-30 mcg ye-ethinylestradiol kunye ne-75 mcg ye-gestodene.
2. Izenzo ze-Biochem / physiol-CAS: 60282-87-3
I-Gestodene powder yiprogesin yokwenziwa kokusetyenziswa njengendlela yokukhulelwa. I-Gestodene ibonisa ukuxhamla okuphezulu okubophayo kwi-progesterone receptor, kwaye ibophelela ngokuqinile kwi-adrogen kunye ne-glucocorticoid receptors.
3. Gestodene Usebenzisa
I-Gestodene ayithathi hlangothi ngokwemisebenzi ye-androgenic, oku kuthetha ukuba iipilisi zokukhusela ezine-gestodene azibonisi iziphumo zecala ze-androgenic (umz., I-acne, i-hirsutism) ngamanye amaxesha zidibaniswa neepilisi zokuzala izizukulwana zesibini ezifana nezo ezine-levonorgestrel.
Isilinganiso se-estrogen kwiipilisi zokuzala izityalo zesithathu (kubandakanye nezo zine-gestodene) zingaphantsi kunezo zibeleko zokubeletha ngomlomo wesibini, ukunciphisa amathuba okufumana ubunzima, ukunyamezela isisu, kunye ne-migraine.
Isizukulwana sesithathu sesizukulwane sokukhulelwa komlomo nazo zifanelekile ukusetyenziswa kwizigulane ezineesifo sikashukela okanye iziphazamiso zepilisi kuba zinemiphumo encinci kumanqanaba e-glucose yegazi kunye nepropid profile. I-Gestodene ifumaneka ngokudibanisa ne-estradiol ekusetyenzisweni kwonyango ye-hormone ye-menopausal.
4. Indlela yokuthatha i-Gestodene powder?
I-Gestodene powder iyi-progestogen entsha enokwenziwa kunye nesakhiwo esinxulumene nevonorgestrel. Ukudibanisa i-gestodene powder kunye ne-ethinyloestradiol yindlela yokukhulelwa kwaye le mveliso yindlela yokwenza i-monophasic neyesithathu.
Kuthathwe ngomlomo, i-gestodene powder iyatholakala ngokupheleleyo. Ibophezela sex hormone i-globulin ebophayo kwaye isuswe yimetabolism. Uninzi lweemetabolites ludityaniswe kumchamo.
Ukuba iipilisi ze-gestodene / ethinyloestradiol zithathwa ngokuchanekileyo, ukukhulelwa akunakwenzeka ukuba kwenzeke. Ulawulo lwemizila lungcono ngakumbi kuneepilisi zamonophasic eziqukethe i-levonorgestrel, nangona akuzange kubekho uphando olufanayo.1 Spotting ivela kwi-3-6% kunye nokuphuma kwegazi kwi-1% yezigulane.
Imiphumo yokuxilonga kwezi mveliso ifana neyezinye izicwangciso zokukhulelwa zomlomo ezidibeneyo, umz. Uluhlu lwemiphumo emibi lubonakala lufana.
Ezi mveliso kufuneka zimiselwe ngendlela efana neyokhoyo yokufumana i-contraceptive yomlomo. Ziziphi iingcali ezifunekayo ukuba ziyazi ukuba ingaba i-gestodene powder inanoma yintoni inzuzo ngaphezu kwamanye amaprogiji. Ukwaziswa kwe-Overseas kukhombisa ukuba le mveliso iya kuba yindleko kunezikhuphiswano zabo. Ngoko ke, i-gestodene powder equkethe iimveliso ingaba yinzuzo kwizigulane ezineengxaki xa zithatha ezinye izithintelo zomlomo.
5. Imiphumo emibi yeGestodene
Abafazi abasebenzisa izithintelo zokukhulelwa ngomlomo eziqukethe i-gestodene powder ngamaxesha e-5.6 njengokuba banokuthi bahlakulele i-thromboembolism enomdla kunabasetyhini abangathathi naliphi na iipilisi zokukhulelwa, kunye namaxesha e-1.6 njengokuba kunokwenzeka ukuhlakulela i-thromboembolism enomdla ngokuqhathaniswa nabasetyhini abathatha i-levonorgestrel.
6. Gestodene izicelo: Femodene
(1) I-Femodene (ethinylestradiol kunye ne-gestodene)
Iipilisi ze-Femodene zihlobo lwe-hormonal contraception eyaziwa ngokuba yi-'pilisi 'okanye idilesi yokudibanisa yomlomo. Iiphilisi ze-Femodene ziqulethe izithako ezimbini ezisebenzayo, i-ethinylestradiol kunye ne-gestodene powder. Ezi ziinguqulelo zentsebenziswano ye-hormone yesini, ngokwemvelo, i-estrogen kunye ne-progesterone. I-Ethinylestradiol inguqu yokwenziwa kwe-estrogen kunye ne-gestodene powder 'ifomu yesithathu' yokwenziwa kweprogesterone.
(2) Yintoni i-Femodene esetyenziselwa yona?
Ukukhulelwa (ukukhusela ukukhulelwa).
Ukuthatha iipilisi zokukhusela ngokuqhelekileyo kukhokelela ekukhanyeni komzimba, kungaphantsi kobuhlungu kunye nokuphuma kwexesha eliqhelekileyo. Oku kuthetha ukuba ngamanye amaxesha kunikwe umyalelo kubasetyhini abaneengxaki ezinzima kakhulu, ezibuhlungu okanye ezingaqhelekanga.
(3) U-Femodene usebenza njani?
Iiphilisi ze-Femodene luhlobo lwe-hormonal contraception eyaziwa ngokuthi 'ipilisi' okanye idilesi yokudibanisa yomlomo. Iiphilisi ze-Femodene ziqulethe izithako ezimbini ezisebenzayo, i-ethinylestradiol kunye ne-gestodene powder. Ezi ziinguqulelo zentsebenziswano ye-hormone yesini, ngokwemvelo, i-estrogen kunye ne-progesterone. I-Ethinylestradiol inguqu yokwenziwa kwe-estrogen kunye ne-gestodene powder 'ifomu yesithathu' yokwenziwa kweprogesterone.
(4) Ndithatha njani i-Femodene?
I-Femodene yipilisi e-monophasic. Oku kuthetha ukuba ithebhulethi nganye inomlinganiselo ofanayo wamahomoni kuwo. Elinye ithebhulethi ithathwa imihla ngemihla kwii-21 iintsuku kwaye ube nekhefu leentsuku ezisixhenxe ukusuka kwipilisi. Ngethuba lokuphumla kwakho kweentsuku ezisixhenxe, amazinga ama-hormone ehla egazini lakho, okuphumela ekuphumeni kwegazi elifana nexesha eliqhelekileyo. Uqala ipakethi elandelayo emva kweentsuku ezisixhenxe zeepilisi ezingenasiphelo, nangona usaphuma.
Amacwecwe afika kwikharenda yekhalenda ephawulwe ngeentsuku zeveki ukukunceda ukhumbule ukuthatha ipilisi imihla ngemihla kwiiveki ezintathu, ilandelwa liveki. Uyakukhuselwa ngokukhulelwa kwisonto lakho elingenasipilisi, ngaphandle kokuba uthathe zonke iipilisi ngokuchanekileyo, uqala ipakethe elandelayo ngexesha kwaye akukho nto enye eyenzekayo eyenza ukuba ipilisi ingasebenzi kakuhle (isib. Ukugula, uhudo, okanye ukuthatha ezinye izinto amayeza - jonga ngezantsi).
Kufuneka uzame uthathe ipilisi yakho ngexesha elinye ngosuku; oku kuya kukunceda ukhumbule ukuyithatha. Ithebhulethi nganye kufuneka igonywe ngiselo. Zingathathwa kunye okanye ngaphandle kokutya.
7. Gestodene powder kwintengiso
Ukutyelela i-pharmacy yethu kwi-intanethi uze ugcwalise umyalelo we-Gestodene powder (I-CAS: 60282-87-3). Chaza indawo yokuhambisa, ubuninzi bemveliso kunye nendlela yokuhlawula. Ngethuba lemizuzu ye-30, uya kufumana isiqinisekiso sakho somyalelo. Iya kukhutshwa kwiintsuku ze-10 zeentsuku.
Yiya ku-www.aasraw.com. ngoko ukuyilungisa iimveliso kuthi kulula kakhulu:
(1) Ukusixelela izinto eziphi na ukuba ungaphi.
(2) Sikubonelela ngexabiso elifanelekileyo kunye nemigaqo yokuhlawula.
(3) Intlawulo eyenziwe kunye nepakethi ehanjiswayo, kunye nomfanekiso wempahla kunye nenombolo yokulandelela.
(4) Efanelekileyo yamkelwe kwaye inike izimvo.
(5) Eminye imiyalelo.
I-Methylprednisolone powder: Ukusetyenziswa, Isisombululo, Imiphumo emibi, Imbonakalo kunye nokunye	Izinto ze-8 ezibalulekileyo zePowderolone Powder